YENZA INDAWO YOKUTYELA
Ukujongana nengxaki eyandayo yamanzi evela kutshintsho lwemozulu olukhawulezileyo kunye nokukhula kwezoqoqosho, sisenalo ithemba ngekamva njengoko siqinisekile ukuzisa abantu abaninzi banamava akhuselekileyo nasempilweni ngamanzi ngokulandela ukugqibelela kwimveliso nganye.
Siyikhathalele impilo-ntle yomqeshwa ngokuxhasa intsalela yomsebenzi wakhe ebomini kunye nokubonelela ngenkxaso yezempilo yengqondo enje ngengcebiso yezengqondo, kuba babakhathalele abona bantu baxabisekileyo emhlabeni: amaqabane ethu.
Sizimisele umsebenzi wokubuyisela kunye nokwenza igalelo kuluntu kunye noluntu ngoncedo loluntu kwizibonelelo zalapha ezifana nomnikelo wethu ngamaxesha obunzima bokubhubha kwe-COVID-19.
Yonke into esiyenzayo, siyenza nemeko-bume engqondweni. Njengenkampani ehambisa intsikelelo yamanzi, samkela ukuvumelana nendalo, sihlala sinamathele kwingcinga yeshishini lokukhula okuzinzileyo kunye nokukhathalela umhlaba.
Hluza iCartridge, Cofa inkqubo yokuCoca amanzi, Eyona Ndlela yokuBuyisa iOsmosis, Indlu yonke yokuCoca uManzi, Ukutshintshwa kweFilitha yeCartridge yaManzi, Umcoci wamanzi waManzi aKhuni,